people Nepal » ‘पहिले हेप्थे, अहिले सम्मान गर्छन्’ ‘पहिले हेप्थे, अहिले सम्मान गर्छन्’ – people Nepal
Posted on August 20, 2016 August 21, 2016 by Durga Panta
पफ्र्यूम कम्पनिमा काम गरेको दुई वर्षपछि उनले सोचेँ, हामीले मेहनत गरेर अरुलाई दिएकाछौँ भने यो काम आफै किन नगर्ने ? उनले रातदिन महनत गरेर आफ्नै कम्पनि चलाउने मनमनै अठोट र संकल्प गरेँ । पफ्यूमका बारेमा बढी चाँसो राखेर सिक्दै गएँ । छुट्टिको समयमा साथीभाईहरु घुमफिर गर्दा जाँदा उनी भने सिनियर साथीहरुसँग सिक्ने काम गरेँ ।
उनले कामको साथै पफ्यूमको लागि चाहिले कच्चा पदर्थ र अन्य सामान कहाँबाट आउँछ भन्ने जानकारी लिन निकै महनत गर्नु परेको थियो । पफ्र्यू बनाउन उनले सुडान र अफ्रिकनहरुसँग सिकेँ । उनले काम गर्ने कम्पनिमा भारतियहरु पनि थिए । तर, उनीहरुले नेपाली भनेपछि कहिल्यै अगाडि आउन नदिएको बताए । ‘नेपालीले के गर्न सक्छन् भन्दै बारम्बार हेप्ने गर्दथेँ’ उनले सुनाएँ । उनले अगाडि थप्दै भने ‘भारतियहरुको दिमाग नकारात्मक सोचले नै भरिएको छ ।’
सुडानका साथिहरुसँग एकले अर्कोलाई भाषा सिकाउँदै जाँदा पफ्र्यूम बनाउन प्रयोग हुने विधि र तरिकालाई उनले निकै चासोँ दिएर सिके । उनको काम गर्ने र सिक्ने इच्छा देखेर अफ्रिकन र सुडानीहरुले माया गरेरै सिकाए पनि । उनीहरुसँगको सम्बन्धले शिप सिक्ने सुनौलो अवसर मिल्यो । उनले कम्पनिमा कामको साधै पप्mर्यूम बनाउने तरिका अध्ययन गर्दै गएँ ।
त्यसको लागि मोहम्मदले पाँच वर्ष दिनरात एक बनाएर दुःख गर्नु पर्यो । पाँच वर्षपछि त्यो कम्पनिको मालिकबाट उनलाई नसोचेको अफर आयो, ‘मिलेर काम गर्ने ।’ उनले यसलाई इमान्दारी पूर्वक गर्ने अठोट आफैसँग गरे । ‘कम्पनिको मालिकले मेरो काम नजिकबाट अध्ययन गरेका रहेछन् । मलाई थाहा थिएन । ती उद्योगिले भित्री रुपमा मलाई काम राम्रो गर्नेमा राखेका रहेछन् । त्यो कुरापछि मात्र थाहा भयो ।’ मिलेर काम गर्ने अफरलाई स्वीकार गरेपछि कतारिले सम्पूर्ण जिम्मेबारी उनलाई दियो ।
‘मेरो इमान्दारीताले यहाँसम्म ल्याई पुर्याएको हो । पहिलो तलब बुझ्दाको सम्झना छ । जम्मा ६ हजार बच्यो । बुबालाई फोन गरेँ । ६ हजारले त्यहाँ के होला र ? म यहीँ काम गरौं की घर आऊँ ? बुबाले भन्नुभयो, ‘तिमिलाई खान पुग्छ भने नआऊ, यताको चिन्ता नगर ।’ उनलाई बुबाको त्यो भनाईले काममा सफलता पाउन धैर्यता गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो । उनले भने ‘यदि बुबाले साथ र हौसला नदिएको भए, पहिलो तलबसँगै घर फर्कने थिएँ । कतारको पहिलो कम्पनि सञ्चालन गर्ने व्यवसायी बन्न, मेरो परिवारले पनि त्यत्तिकै महनत गरेको छ ।’
‘समान्य कामदारको रुपमा कतार छिरेको नेपालीको छोरा यति छिटो पफ्र्यूम व्यवसायी बन्छु भन्ने सोचेको थिइन’ ‘काम सिक्छु भन्ने चाहिँ थियो’ मोहम्मदले सुनाए । अहिले कतारमा उनको दुई वटा सोरुम सञ्चालनमा छन् । सामान्य पसललाई उनले फ्याक्ट्रीमा बदलिदिएका छन् । उनी कतारको ठूलो होलसेलर व्यवसायी मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्दछन् ।
उनको सबै परिवार अहिले पनि गोरखामै बस्दै आएको छ । अहिले उनको घरमा भाई बहिनी, आमा बुबा , श्रमती र एक छोरा र एक छोरी छन् । भूकम्पले उनको पसल राखेको घर भत्कियो । त्यसपछि उनको बुबाले व्यवसाय गर्न छोडिदिनु भयो । परिवार पाल्नका लागि देश छोडेँका उनले अहिले समाजमा धेरै पीडितका आँसु पुछेका छन् । देशमा भूकम्प जाँदा कतारबाट एक ट्रक सामान सिन्धुपाल्चोकको बाहुन डाडाँ पठाउने पहिलो नेपाली हुन उनी । उनी पनि भूकम्प पीडित नै हुन ।